လူခါး: ကြက်ခြေခတ် ရင်
ဖိနပ်ကလေးတစ်ဖက်ကြောင့် လူ့အသက်တစ်ချောင်းဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရသည်ဆိုလျှင် သင်ယုံကြည်ပါမည်လား။ အကယ်၍ သင်မယုံကြည်ပါဟု ဆိုလျှင်လည်း ရပါသည်။ သို့သော် ဖိနပ်တစ်ဖက်ကြောင့် လူ့အသက်တစ်ချောင်းဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတာကတော့ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ထက်ပို၍ တိတိကျကျပြောဆိုရလျှင် ဖိနပ်ကလေးတစ်ဖက်နှင့် စပ်လျင်း၍ လူတစ်ယောက်အသက် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရသည်မှာ ကျွန်တော်၏ မိုက်မဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်၏အလုပ်ခွင်ဖြစ်သောတရားမ၀င်လောင်းကစားဆိုင်လေးသည် ရှေ့နောက်ရှိသမျှတံခါးများအား အလုံပိတ်ထားသောကြောင့် ဆေးလိပ်ငွေ့တို့ဖြင့် မွှန်ထူလောင်မြိုက်လျှက်ရှိသည်။ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါလျှက် ၀င်လာမစဲ တသဲသဲ ရှိလှသော customer များအား စိတ်ထဲမှ ကျိတ်၍မေတ္တာပို့နေမိသည်။
ကျွန်တော်၏အလုပ်သည် ည ကိုးနာရီမှ မနက်ကိုးနာရီအထိဖြစ်၍ အလုပ်ချိန်မှာ တစ်ရက် ဆယ့်နှစ်နာရီ ဖြစ်သည်။ တရားမ၀င် အလုပ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်သော ကျွန်တော်သည် ဤတရားမ၀င် casino လောင်းကစားလောကသို့ ရောက်ရှိနေသည်မှာ တစ်နှစ်နှင့် ငါးလခန့်ရှိပြီ။ လောင်းကစားလုပ်ငန်းသည် အခြားစက်ရုံအလုပ်ရုံများမှ အလုပ်သမားများနှင့် မတူ။ လစာကောင်းသည်။ လူသက်သာသည်။ သို့သော် အန္တရာယ်များလှသည်။
ကျွန်တော် ဤလောကထဲသို့ရောက်ရှိလာသည့်နေ့မှာပင် ဒူးတုန်စရာအဖြစ်နှင့် ကြုံခဲ့ရသေးသည်။ ထိုနေ့က သူဌေးနှင့် အင်တာဗျူးဖြေပြီး၍ ဆိုင်ကလေး၏အပြင်ဘက်တွင် ကျွန်တော်ထိုင်နေစဉ်ဖြစ်သည်။ ယူနီဖောင်းဝတ်များ အများအပြားပါရှိသော လော်ရီကားကြီးနှစ်စီးက ကျွန်တော့်အနီးသို့ ရုတ်တရက် ထိုးရပ်လာသည်။ အန္တရာယ်ပြုမည်၊ မပြုမည်ကိုပင် ကျွန်တော်မတွေးအား။ နီးရာစားသောက်ဆိုင်ထဲသို့ ကျွန်တော်ဝင်ပြေးမိတော့သည်။ ယူနီဖောင်းမြင်လျှင် ကျောစိမ့်အောင်ကြောက်နေတတ်သော စိတ်က ဆိုင်ထဲ၌ထိုင်နေရင်းပင် ဆောက်တည်ရာမရ ဖြစ်နေမိသည်။
`မကြာခဏ ရဲဝင်တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်…. အေးဆေးပါ။ ငါတို့က ပိုက်ဆံပေးပြီးသား´
အင်တာဗျူးစဉ်က သူဌေးပြောသောစကားက နားထဲပြန်ဝင်လာသည်။ သူဌေးဝင်သွားသော လောင်းကစားဆိုင်ကလေးအား လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ယူနီဖောင်းဝတ်များက ဆိုင်ကလေး၏ ပိတ်ထားသော တံခါးများအား ဆောင့်ကန်၊ ထုနှက်၍ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးဖြင့် ထွက်ခွါသွားကြတော့သည်။ ထိုအခါမှ ကျွန်တော့် နှလုံးခုန်နှုန်းများ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာကြသည်။
ကျွန်တော့်အား အလုပ်သွင်းပေးသော ထားဝယ်ဘက်မှ ကိုရာမိုးဆီသို့ ကျွန်တော်ချက်ချင်းဖုန်းဆက်လိုက်သည်။
ကျွန်တော့်အသံက တုန်နေသည်။ ကျွန်တော့်စကားလုံးများက ထစ်နေကြသည်။
ကိုရာမိုးက ကျွန်တော်စကားကို ကြားကြားချင်း မရယ်ရသော ပြက်လုံးတစ်ခုအား ဖျစ်ညှစ်ရယ်လိုက်သကဲ့သို့ ရယ်သည်။
`တကယ်ပြောတာအစ်ကို ၊ အခုလေးတင်ပဲ…… ဒီမှာ´
`ကိုယ်သိပါတယ်ကွ။ သူဌေးခုပဲ ဖုန်းဆက်တယ်။ မင်း အဲဒါကိုကြောက်ရင်တော့ လုပ်လို့ မရဘူးညီ။ ကိုယ်တို့ အလုပ်က နည်းနည်းတော့ ပေးဆပ်ရတယ်။ အဲဒါကလည်း မင်းက ရောက်စမို့ပါ။ နောက်ကျရင် အပရိကလေးတွေ ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒီမှာ ကိုယ်ပြောပြမယ်…. ´
ကိုရာမိုးက နောက်ဆက်တွဲစကားတွေကို တသီကြီးပြောပြပြီး ဖုန်းချသွားသည်။
နောက်ဆုံးတော့ ထို အွန်လိုင်း casino လောင်းကစားလောကထဲသို့ ကျွန်တော်ရောက်သွားသည်။ ၀င်ဝင်ချင်း စပေးသောလစာမှာ ရင်းဂစ် ထောင့်ငါးရာဖြစ်သည်။ မလေးရှား၌ ကျွန်တော်ကျင်လည်ခဲ့ပြီးသော နှစ်နှစ်အတွင်း လစာတစ်ထောင်ပြည့်အောင် ကိုင်ဖူးသောလမှာ မှတ်မှတ်ရရ တစ်လသာရှိသည်။
စစချင်း အလုပ်သမားတစ်ယောက်အနေဖြင့် မလေးရှားထုံးစံအတိုင်း အောက်ခြေသိမ်းမှန်သမျှ သိမ်းကြုံးလုပ်ရသည်။ ကြမ်းတိုက်ရသည်။ အမှိုက်သိမ်းရသည်။ အိမ်သာဆေးရသည်။ အဖမ်းအဆီးလာမည်ဟု သတင်းကြားလျှင် ဆိုင်အပြင်ဘက်မှနေ၍ ကင်းစောင့်ပေးရသည်။ သာမန်ဆိုင်ဖွင့်ရက်များတွင်တော့ Customer များဆီမှ ငွေကောက်၍ ကောင်တာသို့အပ်ရသည်။ သူဌေးပိုင်သောအခြားဆိုင်များတွင် လူလိုလျှင်ဂျိုကာသဘောမျိုး လှည့်လည်၍ ဆင်းပေးရသည်။
ထိုသို့လူသစ်တစ်ယောက်အနေဖြင့် သုံးလခန့်ကြာပြီးမှ ကောင်တာသမားအဆင့်သို့ရောက်သည်။ ကောင်တာသမားဖြစ်တော့ လစာမှာ ထောင့်ခုနှစ်ရာဖြစ်သွားသည်။ လစဉ် ဆိုင်၏အနိုင်စာရင်းထဲမှ အမြတ်ငွေကို အချိုးကျ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။ လူသစ်တုန်းကကဲ့သို့ အခြားဆိုင်များသို့ ဂျိုကာအဖြစ် မသွားရတော့။ ဆိုင်ပိုင်တစ်ဆိုင်ရသည်။
ထိုအပိုင်ရသောဆိုင်တွင် ကျွန်တော်နှင့် လပ်(ဖ်)ချူး ဆုံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ လပ်(ဖ်)ချူးက အသက်ခြောက်ဆယ်ခန့်ရှိသော ညာဘက်လက်တစ်ဖက်ပြတ်နေသည့် အိန္ဒိယအဘိုးကြီးဖြစ်သည်။ အဘိုးကြီးဆိုပေမယ့် သူ့ခန္ဓာကိုယ်က တောင့်တင်းခိုင်မာ၍ ဆိုက်ဂိုက်ကျသည်။ သူ့ညာဘက်လက်မှာ ဆိုင်ကယ်အက်စီးဒင့်ဖြစ်၍ ဖြတ်ပစ်ရသည်ဟုသိရသည်။
လပ်(ဖ်)ချူးက ကျွန်တော်ကောင်တာထိုင်ရသောဆိုင်ကလေးတွင် အပြင်အစောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ လောင်းကစားဆိုင်များကို ညဘက်များတွင် ဓါးပြတိုက်မှုများ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်တတ်သဖြင့် လပ်(ဖ်)ချူးကို အပြင်အစောင့်အဖြစ် သူဌေးက ငှားရမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
လပ်(ဖ်)ချူးကို စတွေ့ခါစက `ဒီလက်တစ်ဖက်ပြတ်နေတဲ့ အဖိုးကြီးက ဓါးပြတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မှာလဲ´ ဟု ကျွန်တော်အထင်သေးခဲ့ဖူးသည်။ ရက်အနည်းငယ်ကြာမှ လပ်(ဖ်)ချူးအကြောင်းကို သိရသည်။
မလေးရှားတွင် သူ့ပုံစံနှင့် သူဖွဲ့စည်းထားသော လူမိုက်ဂိုဏ်းများရှိသည်။ ထိုအဖွဲ့များသည် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ယာကူဆာဂိုဏ်းများကဲ့သို့ မလေးရှားတွင် ထင်ရှားလှသည်။ လူကြောက်များလှသည်။ မည်သည့်ကိုယ်ခံပညာမှ မတတ်သော်လည်း ထိုဂိုဏ်းများတွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ထားသည်နှင့် တော်ရုံပြဿနာကို ပြီးသည်။
သူဌေးက ထိုကဲ့သို့သော ဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်းကို သူ့လောင်းကစားဆိုင်များအား ကာကွယ်ရန် ငှားရမ်းထားသည်။ လပ်(ဖ်)ချူးက ထိုဂိုဏ်းထဲမှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အသားမည်းမည်း ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနှင့် လပ်(ဖ်)ချူးသည် ကျွန်တော့်အတွက် အတော်အားကိုးရပါသည်။ ကျွန်တော့်အား ဖော်ရိန်နာဟုဆိုကာ အနိုင်ကျင့်သော customer သည် လပ်(ဖ်)ချူး၏ အကြည့်အောက်တွင် ပြားပြားဝပ်သွားခဲ့ရဖူးသည်။ စက်ထဲသို့ ပိုက်ဆံထည့်ပြီးမှ `မပေးဘူးကွာ မင်းဘာလုပ်မလဲ´ ဟူသော ကစားသမားအား လပ်(ဖ်)ချူးက ချောင်းတစ်ချက်ဟန့်ကာ ပိုက်ဆံရအောင် တောင်းပေးခဲ့ဖူးသည်။ လပ်(ဖ်)ချူးက ကျွန်တော့်လို သွေးမတော်သားမစပ် ရေခြားမြေခြားမှ သာမန်အလုပ်သမားလေးတစ်ယောက်အား သွေးသားရင်းချာကဲ့သို့ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေခဲ့သည်။
လပ်(ဖ်)ချူးမှာ ကျွန်တော်နှစ်သက်မိသော အချက်တစ်ချက်ရှိသည်။လပ်(ဖ်)ချူးက ပျော်ပျော်နေတတ်သည်။ customer နည်းသည့်အခါမျိုးတွင် ကျွန်တော့်အား `မင်းနဲ့ ငါနဲ့ ဖိုက်မလား´ဟု ရုပ်တည်နှင့် စတတ်သည်။ `မင်းကထွက်ပြေး ငါက ဓါပြလုပ်မယ်´ဆိုပြီး ဓါးပြတိုက်တမ်း ကစားရအောင်ဟုလည်း အဖော်ဆွယ်တတ်သည်။ ဆိုင်ကလေးထဲ၌ လူရှင်း၍ ကျွန်တော်ခုံပေါ်မှောက်အိပ်နေလျှင် မျက်နှာကို အ၀တ်နှင့်စည်းကာ သူဆောင်နေကျ စတီးဓါးကြီးကိုထုတ်၍ `ပိုက်ဆံ……ပိုက်ဆံ´ ဟု ခပ်မိုက်မိုက်ပုံစံနှင့် သရုပ်ဆောင်ပြတတ်သည်။
ယခု ထိုကဲ့သို့ ပျော်တတ်သော ကျွန်တော့်ကို ချစ်ခင်သော ကျွန်တော်က အားကိုးရသော လပ်(ဖ်)ချူးသည် ကျွန်တော်၏ မိုက်မဲမှု၊ ကျွန်တော်၏ပေါ့ဆမှုများကြောင့် လူ့လောကထဲမှ ထွက်ခွာခဲ့ရပြီ။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့ သူ့အား လူ့ဘ၀ထဲမှ ထွက်သွားရအောင် လုပ်လိုက်သူမှာ ကျွန်တော်ဟု လပ်(ဖ်)ချူး သိမသွားခဲ့။ အကယ်၍ သိခဲ့လျှင်လည်း သူ့သွားဖွေးဖွေးများကို စီတန်းနေအောင်ပြုံးရင်း ကျွန်တော့်အားငေးကြည့်နေမည်လား ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါ။ သေချာသည်ကတော့ လပ်(ဖ်)ချူးသည် ကျွန်တော်ပစ်လိုက်သော ကျည်ဆံကြောင့် အဓိပ္ပာယ်မဲ့စွာ သေဆုံးသွားခဲ့ရသော အပြစ်မရှိသည့် လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုနေ့က ကျွန်တော့်ဆိုင်ကလေးထဲတွင် လုံးဝ လူရှင်းနေသောနေ့ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ထဲတွင် ကျွန်တော်နှင့် အကူဖြစ်သော ရခိုင်ဘက်မှ ကောင်လေးတစ်ယောက်သာရှိသည်။ ကောင်လေးက ကျွန်တော့်ဆိုင်ကလေးသို့ ရောက်ရှိလာသောလူသစ်၊ ဘာမှ မသိသေး။ အစစ အရာရာ ကျွန်တော်မှ သင်ပြပေးနေရချိန်ဖြစ်သည်။
ဆိုင်ကလေးအပြင်ဘက်တွင် စောင့်နေသော လပ်(ဖ်)ချူးက သူ့ထုံးစံအတိုင်း လူရှင်းသည်နှင့် ဆိုင်ထဲသို့ဝင်လာကာ အိပ်တော့သည်။ လပ်(ဖ်)ချူးဆီမှ ဟောက်သံ တခေါခေါထွက်လာချိန်တွင် ဆိုင်ရှေ့သို့ လူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး တံခါးခေါက်သည်။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်မသိသော လူဖြစ်နေ၍ လပ်(ဖ်)ချူးအား နှိုးကာပြလိုက်သည်။ လပ်(ဖ်)ချူးကလည်း အိပ်ချင်မှုန်ဝါးနှင့် ဖွင့်ပေးလိုက်ဟုဆိုသဖြင့် ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ ထိုလူဆိုင်ထဲသို့ရောက်၍ ထင်ထင်လင်းလင်းမြင်ပြီးမှ လပ်(ဖ်)ချူးက ကျွန်တော့်အနားလာကာ ခပ်တိုးတိုးပြောသည်။
`အဲဒီကောင်က ဟိုဘက်ဂိုဏ်းကကောင်၊ အရင်က ငါနဲ့ ပြဿနာဖြစ်ဖူးတယ်´
လပ်(ဖ်)ချူးက အဲဒီလောက်ပဲပြောပြီး အိပ်နေကျနေရာမှာ ပြန်သွားအိပ်သည်။ ထိုလူကလည်း လပ်(ဖ်)ချူးကဲ့သို့ပင် တောင့်တောင့်တင်းတင်း ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းဖြစ်သည်။ အလွန်များလှသော စတီးကွင်းကြီးများအား လက်နှင့်လည်ပင်းတွင် ပြည့်နေအောင် ဆွဲထားသေးသည်။
ကျွန်တော်အလုပ်ကို ယခင်နေ့များကထက်ပို၍ ဂရုစိုက်နေမိသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဂိုဏ်းတစ်ခုခုနှင့် ပတ်သက်နေသော သူများနှင့် ပြဿနာတစုံတရာဖြစ်မှာကို ကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဆိုင်အား ဓါးပြတိုက်ရန်၊ လုယက်ရန်မဟုတ်ဘဲ ထိုကဲ့သို့သောလူများက အလုပ်သမားဖြစ်သော ကျွန်တော်တို့ကိုသာ များသောအားဖြင့် ပြဿနာရှာတတ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား ၊ တရားမ၀င်အလုပ်သမားများအဖြစ်လည်း သိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်အထိ ကျွန်တော်ကံကောင်းပါသည်။ ထိုလူက သူ့ပါသလောက် ပိုက်ဆံကိုထည့်ကာ ရှုံးပြီးအေးအေးဆေးဆေးပင် ပြန်သွားပါသည်။ ပြဿနာ၏အစက ထိုလူပြန်သွားမှ ဖြစ်သည်။
ဘာမှ လုပ်စရာမရှိတော့သော ကျွန်တော်က အိပ်ပျော်နေသော လပ်(ဖ်)ချူး၏ ညာဘက်ဖိနပ်ကလေးအား ယူ၍ နောက်ဖေးခန်းထဲတွင် ချွတ်ထားသော မနက်ဆိုင်းသမား၏ ဖိနပ်နှင့် လဲထားလိုက်သည်။ မနက်ဆိုင်းသမား နှစ်ယောက်ထဲမှ တစ်ယောက်က ဖိနပ်ကို ဆိုင်ထဲတွင်တစ်ရံစီး၍ အပြင်တွင် တစ်ရံစီးသူ ဖြစ်သည်။ လပ်(ဖ်)ချူးဖိနပ်နှင့် သူ၏ဖိနပ်မှာ အရောင်အဆင်းရော၊ ပုံသဏ္ဍန်ပါ အလွန်တူကြသည်။ မတူသည်က အရွယ်အစား။ လပ်(ဖ်)ချူး၏ ဖိနပ်က အနည်းငယ်ကြီး ၍နေသည်။ သို့သော် အမှတ်တမဲ့ကြည့်လျှင်တော့ ချက်ချင်းတော့သိနိုင်စရာမရှိ။ ထိုဖိနပ်နှစ်ဖက်အား လဲလှယ်၍ ကျွန်တော်လည်း ကောင်တာပေါ်မှာ မှောက်အိပ်နေလိုက်သည်။
အချိန်မည်မျှကြာအောင် ကျွန်တော်အိပ်ပျော်နေမိသည်မသိ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က လှုပ်နှိုးလိုက်တော့မှ နိုးလာတော့သည်။ မော့ကြည့်လိုက်တော့ လပ်(ဖ်)ချူး။
`ညွန့်…… ငါ့ဖိနပ်နဲ့ မင်းဖိနပ်လဲထားတာမဟုတ်လား´
လပ်(ဖ်)ချူးက ကျွန်တော့နာမည်အား ထိုကဲ့သို့ အဖျားဆွတ်ခေါ်နေကြဖြစ်သည်။ သူ့ညာခြေထောက်တွင် မတန်တဆ ထိုးသွင်းထားသော ဖိနပ်အားမကာ မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်တော်စီးထားသော ဖိနပ်မှာ အောကတ္တီပါ အညိုရောင်လေးဖြစ်သည်။
`ဟာ…..အန်ကယ်ကလည်း ငါစီးတာက ဒီမှာ မြန်မာဖိနပ်ကွ… မင်းလို ဖိနပ်မဟုတ်ဘူး´
ကျွန်တော့်ခြေထောက်အား ရှေ့သို့တိုးကာပြလိုက်ရင်း ပြောလိုက်တော့ လပ်(ဖ်)ချူးက သူ့ခေါင်းသူ ကုတ်တော့သည်။
`ဒါဆို ဘယ်သူလဲသွားတာလဲ၊ ကြည့်ဦး ဒီမှာ ငါ့ခြေထောက်နဲ့ မဆန့်ဘူး´
လပ်(ဖ်)ချူးက ဖိနပ်ကို ရှေ့သို့ လျောခနဲ ချွတ်ကာပြရင်း မေးလာပြန်သည်။ ကျွန်တော် မျက်နှာအား တတ်နိုင်သမျှတည်အောင် ထိန်းလိုက်ရင်း နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ငြင်းလိုက်သည်။
လပ်(ဖ်)ချူးက သူ့ဘာသာစကားနှင့် ဆဲဆိုကာ ဆိုင်အပြင်သို့ထွက်သွားသည်။ ထိုအခါမှ ဖွက်ထားသော ဖိနပ်ကိုသွားယူကာ ဆိုင်ကလေးထဲမှ ကျွန်တော်အပြေးထွက်သွားလိုက်မိသည်။ သို့သော် ဆိုင်အပြင်သို့ ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ လပ်(ဖ်)ချူးမရှိတော့။ ဆိုင်ကယ်ကို အရှိန်ပြင်းပြင်းမောင်းကာ ဆိုင်ရှေ့မှ ထွက်သွားနှင့်ပြီ။ နောက်နေ့ညမှ ပြန်လဲပေးတော့မည်ဟု တွေးကာ ဖိနပ်ကလေးအား နောက်ဖေးခန်းထဲသို့ ကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်သည်။
လပ်(ဖ်)ချူးပြန်သွားသော အချိန်က မနက်ခုနှစ်နာရီခန့်ဖြစ်သည်။ သူပြန်သွားသည်နှင့် ကျွန်တော်နှင့် အကူကောင်လေး ဆိုင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြသည်။ ကောင်လေးက အမှိုက်သိမ်း၊ ကြမ်းတိုက်၊ အိမ်သာဆေး။ ကျွန်တော်က အဲကွန်းတွေဆေး၊ စက်တွေဖုန်သုတ်၊ မှန်တွေဖုန်သုတ်။ အားလုံးပြီးတော့ ရှစ်နာရီထိုးသွားပြီ။ ကျန်သည့်တစ်နာရီက ကျွန်တော်နှင့် ကောင်လေး သူ့ဒေသ ကိုယ့်ဒေသ သတိတရ ပြောဆိုကြရင်း ပြီးသွားသည်။
ကိုးနာရီထိုးတော့ မနက်ဆိုင်းဝင်မည့် အလုပ်သမားနှစ်ယောက်ရောက်လာကြသည်။
ဆိုင်ထဲရောက်ရောက်ချင်း တစ်ယောက်ကမေးလိုက်တော့ ကျွန်တော်ရင်ထိတ်သွားမိသည်။
ဓါးပြတိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုင်အဖမ်းခံရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်ပြီဟူသော အတွေးနှင့် ကျွန်တော်အလန့်တကြားမေးလိုက်မိသည်။
`မဟုတ်ဘူး၊ ညဘက်ဒီဆိုင်မှာ စောင့်တဲ့ အဘိုးကြီး သေပြီတဲ့´
ကျွန်တော့်ပါးစပ်မှ ထွက်သွားသော`ဘာ´ဆိုသည့် အသံထဲတွင် အံ့သြခြင်းနှင့် အတူ မယုံကြည်နိုင်ခြင်းများပါ ရောပြွမ်း၍နေသည်။
`ဟုတ်တယ် ။ မနက်က ဒီက အပြန်ဓါးထိုးခံရတာတဲ့´
ပြောတဲ့လူက သူကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့သလို တိတိကျကျကြီး ပြောနေသည်။
`ဟုတ်လို့လားကွာ၊ မင်းကလည်း မနက်ကတောင်……´
`ဟုတ်ပါတယ်ဆို၊ သူဌေးတို့တောင် အခုသွားကြတယ်´
ကျွန်တော့်စကားမဆုံးခင် ဖြတ်ပြောလိုက်သည့် သူ့စကားကို ဆုံးအောင်စောင့်မနေတော့ဘဲ ကျွန်တော်ဆိုင်ကလေးထဲက ပြေးထွက်လာခဲ့သည်။ တက်စီနှင့် ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ လပ်(ဖ်)ချူးက တစ်ဘ၀လုံးစာအတွက် အိပ်ပျော်နေပေပြီ။ သူ့မိန်းမနှင့် သားသမီးများက တက်သွားမတတ် ယူကြုံးမရ ငိုနေကြသည်။ လျှပ်တပြက်ပြောင်းလဲသွားသော အဖြစ်အပျက်အား ကျွန်တော်မျက်လုံးအ၀ိုင်းသားနှင့် ငေးကြည့်နေမိသည်။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ လပ်(ဖ်)ချူးရယ်။ တစ်သက်လုံးတွဲလာခဲ့သော လက်တွဲဖော်တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးလိုက်ရသကဲ့သို့ ကျွန်တော်ဝမ်းနည်း ကြေကွဲနေမိသည်။
ခဏနေတော့ ကျွန်တော့်လိုပင် ညဘက်အလုပ်လုပ်ရသော အလုပ်သမားများလည်း သတင်းကြားသဖြင့် ရောက်လာကြသည်။ ထိုအထဲမှ မြန်မာစူပါဗိုက်ဆာဖြစ်သော ရန်ကုန်မှ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်အား အကျိုးအကြောင်းမေးကြည့်လိုက်သည်။
`ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ အစ်ကို၊ မနက်ကမှ အကောင်းကြီး´
`ဗျာ………၊ အစ်ကို ဘယ်လိုကြောင့်ရယ်….´
ကျွန်တော် ကိုရန်ကုန်သားနားသို့ နီးနိုင်သမျှနီးအောင် တိုးကပ်သွားလိုက်သည်။
`ဖိနပ်တစ်ဖက်တဲ့၊ သူစီးတဲ့ ဖိနပ်ကို အရင်က သူနဲ့ပြဿနာဖြစ်ဖူးတဲ့ကောင်က ယူသွားလို့ သူနဲ့ စကားများကြရင်း ဓါးနဲ့ထိုးခံရတာ´
ကျွန်တော့်ခေါင်းတွေ ချာချာလည်သွားသည်။ တဒိတ်ဒိတ်ဆောင့်တက်လာသော နားထင်ကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်ဖိကာ လဲကျမသွားအောင် တင်းထားလိုက်ရသည်။ ကိုရန်ကုန်သားက ကျွန်တော့်အမူအယာအား မရိပ်မိသောကြောင့် သူ့စကားကိုသာဆက်ပြောနေသည်။
`မင်းဆိုင်က စတဲ့ ပြဿနာတဲ့ ။ မင်းဆိုင်ထဲမှာ သူအိပ်နေတုန်း အဲဒီလူလာဆော့တယ်တဲ့။ အဲဒီအပြန်မှာ လဲစီးသွားတာတဲ့။ မင်းဆိုင်က သူပြန်လာတော့ လမ်းထိပ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အဲဒီလူနဲ့ တွေ့ပြီး ပြဿနာဖြစ်ကြတာ´
ကိုရန်ကုန်သားပြောသည့် စကားတို့က ကျွန်တော့်နားထဲ လေမုန်တိုင်းဝင်မွှေ့သကဲ့သို့ ခံစားလိုက်ရသည်။ ကျွန်တော်ချက်ချင်း ဆိုင်ကလေးရှိရာပြန်ပြေးလာခဲ့သည်။ ဆိုင်ရောက်တော့ ညကအဖြစ်အပျက်များအား CCTV ထဲတွင် ရင်တုန်ပန်းတုန်ဖြင့် ပြန်ကြည့်နေမိသည်။ လပ်(ဖ်)ချူး၏ခြေထောက်မှဖိနပ်၊ မနက်ဆိုင်းအလုပ်သမားချွတ်ထားခဲ့သော ဖိနပ်၊ ညက ဆိုင်လာဆော့သည့် လပ်(ဖ်)ချူးနှင့် ရန်စရှိဖူးသူ၏ဖိနပ်။
ထိုဖိနပ်သုံးရံမှာ ထူးဆန်းတိုက်ဆိုင်စွာ တူညီနေကြသည်။ နောင်တ တရားတို့က ကျွန်တော့်ရင်ကို မညှာမတာဝင်ဆောင့်လျှက်ရှိသည်။ အကယ်၍ ညကအပြုအမူမျိုး ငါမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆိုသည့် အတွေးက သရဲတစ္ဆေတစ်ကောင်လို ခြောက်လှန့်လျှက်ရှိသည်။
မနက်ဆိုင်းဝင်နေသော ကောင်တာသမားက မေးလိုက်တော့ ရုတ်တရက်ကျွန်တော်ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး ဖြစ်သွားသည်။ `ဘာမှမထူးပါဘူးကွာ´ ဟုဖြေလိုက်ကာ ဆိုင်ကလေးထဲမှ ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဆိုင်ကလေး၏အပြင်ဘက်တွင်တော့ လပ်(ဖ်)ချူးထိုင်နေကျ ထိုင်ခုံကလေးက နေရာမပျက်ရှိနေသည်။
ကျွန်တော်၏လုပ်ရပ်အတွက် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ မသိ၊ မမြင်၍ အပြစ်မတင်ကြသော်လည်း လပ်(ဖ်)ချူး၏ ၀ိဥာဉ်ပူးကပ်နေမည်ဖြစ်သော ထိုခုံကလေးကိုတော့ နောင်တစိတ်တို့ ပိုက်ထားရင်း ကျွန်တော် အမှန်တကယ် စိုးရွံ့နေခဲ့မိပါသည်။
စာပွင့်လွှာ ရသစုံ မဂ္ဂဇင်း ၊ ၂၀၁၃ ၊ ဇန်န၀ါရီ
Posted by လူခါး at 05:33:00